? => O2 (oxygen) | Isku-dheelitirnaanta isla'egta Kiimikada
tat-ca = O2 | Isu dheellitirka Kiimikada
Natiijooyinka 322 helay
Muujinta isleeg ka 6 ilaa 10 Bogga 2 - Fadlan U Gudub Dhamaadka Si Aad U Aragto Natiijooyin Badan
( đỏ - vàng ) (iyo bac) (xoog leh)
2 2 1 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 2HgO → 2Hg + O2
Waa maxay xaaladda falcelinta ee HgO ()?
Heerkulka: 450 - 500 ° C
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa Hg (mercury) iyo O2 (oxygen)?
Dhacdada ka dib HgO ()
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 2HgO → 2Hg + O2
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta HgO ()
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee HgO ()? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee HgO () ka falceliya?
Su'aalaha la xidhiidha Hg (mercury)
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee Hg ()? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Hg (mercury) badeecad ahaan?
2SO3 ↔ O2 + 2SO2
Oxygen baaruud dioxide
(lng) (kh) (kh)
(xoog leh) (xoog leh) (jacayl, jacayl)
2 1 2 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 2SO3 → O2 + 2SO2
Waa maxay xaaladda falcelinta SO3 ()?
Heerkulka: heerkulka Xalka: V2O5
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa O2 (oxygen) iyo SO2 (sulfur dioxide)?
Dhacdada ka dib SO3 ()
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 2SO3 → O2 + 2SO2
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta SO3 ()
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee SO3 ()? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh SO3 () falcelin ahaan?
aluminium oksaydh aluminium Oxygen
(rnn) (rnn) (kh)
(trung) (Trang BAC) (xoog leh)
2 4 3 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 2Al2O3 → 4Al + 3O2
Waa maxay xaaladda falcelinta ee Al2O3 (aluminium oxide)?
Heerkulka: 900 ° C Xaaladda Kale: dhalaalida elektroolka
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa Al (aluminium) iyo O2 (oxygen)?
Dhacdo ka dib Al2O3 (aluminium oxide)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 2Al2O3 → 4Al + 3O2
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta Al2O3 (aluminium oxide)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee Al2O3 (aluminium oxide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Al2O3 (aluminium oxide) falcelin ahaan?
Su'aalaha la xidhiidha alaabta Al (aluminium)
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee Al (aluminium oxide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Al (aluminium) badeecad ahaan?
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee O2 (aluminium oxide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh O2 (oxygen) badeecad ahaan?
KP dioxide manganese ah Oxygen
(rnn) (rnn) (kh) (r)
(Dhim) (ka) (xoog leh) (la soco)
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 2KMnO4 → MnO2 + O2 + K2MnO4
Waa maxay xaaladda falcelinta KMnO4 (potassium permanganate)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa MnO2 (manganese dioxide) iyo O2 (oxygen) iyo K2MnO4 ()?
Dhacdo ka dib KMnO4 (potassium permanganate)
Gaaska oksijiin waxaa loo diyaariyey iyadoo la baabi'inayo xeryahooda qani ku ah oksijiinta iyo kuleylka aan degganeyn sida KMnO4
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 2KMnO4 → MnO2 + O2 + K2MnO4
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta KMnO4 (potassium permanganate)
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee KMnO4 (potassium permanganate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh KMnO4 (potassium permanganate) falcelin ahaan?
Su'aalaha la xidhiidha alaabta MnO2 (manganese dioxide)
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee MnO2 (potassium permanganate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh MnO2 (manganese dioxide) sida badeecad ahaan?
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee O2 (potassium permanganate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh O2 (oxygen) badeecad ahaan?
Su'aalaha la xidhiidha alaabta K2MnO4 ()
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee K2MnO4 (potassium permanganate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh K2MnO4 () badeecad ahaan?
2F2 + 2H2O → O2 + 4HF
foloraydh biyaha Oxygen fluoride hydrogen
(kh) (lng) (kh) (lng)
(la soco) (xoog leh) (xoog leh) (xoog leh)
2 2 1 4 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 2F2 + 2H2O → O2 + 4HF
Waa maxay xaaladda falcelinta F2 (fluorine) ee ay kaga falceliso H2O (biyaha)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa O2 (oxygen) iyo HF (hydrogen fluoride)?
Dhacdada F2 ka dib (fluorine) waxay la falgashaa H2O (biyaha)
Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad fiiriso si aad u aragto haddii walaxda sheyga HF (hydrogen fluoride), oo soo muuqanaya dhamaadka falcelinta.
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 2F2 + 2H2O → O2 + 4HF
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta F2 (fluorine)
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee F2 (fluorine)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh F2 (fluorine) falcelin ahaan?
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee O2 (biyaha)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh O2 (oxygen) badeecad ahaan?
Su'aalaha la xidhiidha alaabta HF (hydrogen fluoride)
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee HF (biyaha)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh HF (hydrogen fluoride) alaab ahaan?
Muujinta isleeg ka 6 ilaa 10 Page 2